Dagaal saaka ka socda Magaalada Beledweyne – AfmoNews
Dagaal saaka ka socda Magaalada Beledweyne
Wararka ka imaanaya Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saaka uu dagaal ka socdo magaaladaasi.
Dadka reer Beledweyne ayaa ku soo toosay rasaas ka dhaceysa magaalada, iyadoo dagaalku uu u dhaxeeyo Ciidamada Dowladda iyo dhalinyarada la sheegay inay yihiin kuwii deegaanka oo isa soo abaabulay.
Dhalinyarada ayaa weeraray saldhig Ciidamada Booliska ku leeyihiin Buundo 1aad, halkaasoo la soo sheegayo in dagaalka uu ka socdo.
Warar kale ayaa sheegaya in cidda weerarka qaaday ay yihiin maleeshiyaad maalmihii ugu dambeysay isu uruursaneysay magaalada bannaankeeda, isla-markaana ay xalay gudaha u soo galeen magaalada, inkastoo aanay jirin cid si dhaba warkaasi u xaqiijin karta.
Sidoo kale dadweyne isugu soo baxay wadooyinka Magaalada Beledweyne ayaa la soo sheegaya in ay wadaan bannaanbax looga soo horjeedo Madaxweynaha Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) oo maanta lagu wado in uu gaaro magaaladaasi.
Madaxweyne Guudlaawe ayaa maalmo ka hor baajiyay safar lagu waday inuu ku taggo Xarunta Gobolka Hiiraan, ka dib bannaanbaxyo rabshado wata oo looga soo horjeedo, kana dhacay Magaalada Beledweyne.
Si kastaba ha-ahaatee xaaladda Magaalada Beledweyne ayaa saaka ah mid kacsan, waxaana uu dagaalku ku soo aadaya, iyadoo ay maanta tahay maalin nasiino oo Jimco ah.